SMPTE သည် # IBC2015 တွင် UHD Dialog သို့ရောက်ရှိခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » SMPTE #IBC2015 မှာ UHD Dialog ကိုတိုးတက်လာ
SMPTE #IBC2015 မှာ UHD Dialog ကိုတိုးတက်လာ
ဘာဘရာ Lang မှာအလုပ်အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ by SMPTE
ယခုပင်လျှင်အများကြီးစက်မှုလုပ်ငန်းဘက်ဇ်၏အာရုံ, ultra high definition (UHD) IBC2015 ချဉ်းကပ်မှုအဖြစ်ပူပြင်းတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ နေ့တိုင်းတစ်ခုစွဲငြိဖွယ်ရာမြင်ကွင်းအတွေ့အကြုံပေးပို့တိုးမြှင် Spatial resolution ကိုမြင့်မား dynamic range ကို (HDR) နှင့်ကျယ်ပြန့်အရောင်အစအဆုံးအကုန် (WCG) ၏ပံ့ပိုးမှုများကိုပိုကောင်းစက်မှုလုပ်ငန်းများကျယ်ပြန့်အေိမျမြားဖွငျ့နားလည်သဘောပေါက်လာကြပါတယ်, UHD အကြောင်းအများကြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူးနေဆဲဖြစ်သည်။ ဤသည်က၎င်း၏လျင်မြန်ဆင့်ကဲနေသော်လည်း, ထုတ်လွှင့်မှုအတွက် UHD တစ်ဦးပြည့်စုံနှင့်ကောင်းမွန်စွာထူထောင်ဂေဟစနစ်မရှိဘဲနည်းပညာဖြစ်နေဆဲအကြီးအကျယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ UHD န်ဆောင်မှုများ၏အမှန်တကယ်ပထမဆုံးအကြိမ်ထုတ်ဝေရောင်းချခြင်းအဆုံးကနေအဆုံးမှအတှဲထုတ်လွှင့်ဂေဟစနစ်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်တစ်အိမ်ရှင်, တောင်းဆိုနေပြီ။
SMPTE ၎င်း၏စံချိန်စံညွှန်းများ၌ဤဂေဟစနစ်မှာရှည်လျားပြီးခက်ခဲကြည့်အလုပ်လုပ်နှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းခေါင်းစဉ် IBC2015 မှာနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ session ကိုရန်၎င်း၏ကျွမ်းကျင်မှုဆောင်တတ်၏ယူပြီးထားပြီး "UHD: ဘယ်မှာရှိသနည်းကျနော်တို့ရပ်ပါနဲ့, အဘယ်မှာရှိကျနော်တို့ Going နေ" ဟုအဆိုပါ Society ကအဖွဲ့ဝင်များလိမ့်မည်သော်လည်း အဆိုပါ IBC2015 ပြပွဲကာလအတွင်းအစည်းအဝေးများအမျိုးမျိုးအထောက်အကူပြု, ဒီအထူးသဖြင့် session တစ်ခုကထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ် SMPTE။ 16 ဘို့စီစဉ်ထား: တနင်္ဂနွေ 00 စက်တင်ဘာ 13 နည်းပညာတက္ကသိုလ်စီးအတွက်ကြိုတင်မဲ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်မြပြဇာတ်ရုံထဲမှာအဲဒီ session များကတည်းဖြတ်ကြလိမ့်မည် SMPTE မှာနည်းပညာ၏အကြီးတန်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ, တီဗီချုံ့, သူသည်အလုပ်အမှုဆောင်ဒုတိယဥက္ကဌမဿဲ Goldman, Ericsson က။ သူကပညာရှင် Hans Hoffman ဟာ, အ EBU မှာမီဒီယာထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာ၏ဦးခေါင်းနှင့်ဟောင်းတဦးအပါအဝင်ဟောပြောခြင်းဖြင့်ပူးပေါင်းပါလိမ့်မည် SMPTE စံချိန်စံညွှန်းများဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ; SMPTE အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး Spencer Stephens မှာအလုပ်အမှုဆောင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နည်းပညာအရာရှိချုပ် Sony က ရုပ်ပုံများ Entertainment က, ဂျေမီ Hindhaugh, BT အားကစားနှင့် BT တီဗီမှာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးအရာရှိချုပ်; နဲ့ Richard S. Prodan Broadcom Corporation မှာဒုဥက္ကဌနှင့်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နည်းပညာဆိုင်ရာအရာရှိ,
UHD ရဲ့အကောင်အထည်ဖော်မှုထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ပြဇာတ်ထုတ်အကျိုးသက်ရောက်စေမည်နည်းလမ်းတွေရှာဖွေစူးစမ်းအပြင်ဤစက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်များထိုကဲ့သို့သော UHD-အဆင်သင့်အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်ကလုပ်နိုင်သည့် bandwidth ကိုမှ UHD-နိုင်စွမ်းကင်မရာများ, Switcher နှင့်ဆာဗာအဖြစ်သုံးစက်ကိရိယာများမှအပြည့်အဝ UHD ဂေဟစနစ်ကိုဆန်းစစ်ဖို့အချိန်ရည်စူးပါလိမ့်မယ် ပေး။ ဆွေးနွေးမှုအဘို့စီစဉ်ထားတိကျတဲ့အကြောင်းအရာများ bandwidth ကိုအဘို့အ UHD ရဲ့ဝယ်လိုအားများပါဝင်သည်မည်, မည်သို့ကြောင်းလိုအပ်ချက်စားသုံးသူမှ UHD အကြောင်းအရာပေးပို့ထောကျပံ့မညျဖွစျကွောငျးသစ်ကိုချုံ့နည်းလမ်းများ (နှင့်ဆက်စပ်စံချိန်စံညွှန်းများ) ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုမောင်းနှင်နေသည်။ အငြင်းအခုန်ဝေးကျော်ထံမှကြောင့်သဘာဝ, ကျွမ်းကျင်သူများကိုလည်း Resolution, HDR နှင့် WCG ၏ဆွေမျိုးအရေးပါမှုအပေါ်သူတို့ရဲ့အမြင်များနဲ့ချိန်တွယ်ပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ UHD ဂေဟစနစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုနည်းပညာအသစ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဟာအလားအလာအန္တရာယ်များပြောင်းရွှေ့စေသည်။ , အဲဒီ session စဉ်အတွင်း Goldman, Hoffman ဟာ, Stephens နှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်များကဒီစိုးရိမ်ပူပန်မှု၎င်းတို့၏သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုနှင့်မဟာဗျူဟာဆုံးဖြတ်ချက်ချသြဇာလွှမ်းမိုးဘယ်လိုများနှင့်လည်းသူတို့က UHD ရင်းနှီးမြှုပ်နှံစဉ်ကပင်လျင်မြန်သွက်လက်ဆက်လက်ရှိနေရန်ယူပြီးနေသောခြေလှမ်းများအကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မယ်။
ပထမဦးဆုံး UHD ကလပ်စထွက်လှိမ့်သော "pathfinders" ၏မဟာဗျူဟာနှင့်အောင်မြင်မှုဆနျးစစျကွောငျးကိုဦးဆောင် broadcasters- ပေး - ဤခေါင်းစဉ် Complementing ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာချက်တစ်ခုစီးရီးဖြစ်လိမ့်မည်။ UHD ၏ပြည်နယ်ပေါ်မှာလတ်ဆတ်ခြင်းနှင့်အချိန်မီရှုထောင့်ပေးသည့်အပြင်, ဤကိစ္စတွင်လေ့လာမှုများမီဒီယာကုမ္ပဏီ UHD သို့ပြောင်းရွှေ့နေကြသည်ကိုမည်သို့သို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှု, ထိုကဲ့သို့သောအစပျိုးနောက်ကွယ်မှမဟာဗျူဟာ, သူတို့ကြုံတွေ့ခဲ့ကြစိန်ခေါ်မှုများနှင့်အခွင့်အလမ်းများကို, သူတို့တီထွင်ထူးခြားသောဂေဟစနစ်ပူဇော်ပါလိမ့်မယ် UHD လုပ်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ရုပ်ရှင်ရုံတစ်အဖြစ်မှန်သည့်ဝန်ဆောင်မှုများ။
အဆိုပါဆောင်မှုများအပြင် SMPTE-produced session တစ်ခု, မဿဲ Goldman လည်းအမည်ရ session တစ်ခုတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်လိမ့်မယ် "ဟုအဆိုပါ codec Breaking: ဗီဒီယို Compression ကိုစံချိန်စံညွှန်းလုံလောက်လက်ရှိဖြစ်ပါသလား" နဲ့ SMPTE ခငျြးကိုဒါဝိဒ်သည် Wood က, EBU နည်းပညာနှင့်သတင်းအချက်အလက်, 3DTV နှင့် UHDTV အတွက်ဒီဗွီဘီအုပ်စုများ၏လက်ရှိကုလားထိုင်များနှင့်ကမ္ဘာ့အသံလွှင့်ယူနီယံနည်းပညာဆိုင်ရာကော်မတီအတိတ်ကုလားထိုင်တစ်ခုအတိုင်ပင်ခံ။ 16 ဘို့စီစဉ်ထား: တနင်္ဂနွေ 00 စက်တင်ဘာ 13, အဲဒီ session, လက်ရှိနှင့်ထွန်းသစ်စဗွီဒီယိုချုံ့စံချိန်စံညွှန်းများအပေါ်မထိထိုကဲ့သို့သောစံချိန်စံညွှန်းများ၏နောက်ထပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကားမောင်းတောင်းဆိုချက်များကိုဆွေးနွေးရန်နှင့်သယ်ဆောင်လိမ့်မည်ဟု UHD-related စံချိန်စံညွှန်းများခင်းကျင်းမှာရှေ့ဆက်ကြည့်ပူဇော်ပါလိမ့်မယ် ရှေ့ဆက်ပြီးစက်မှုလုပ်ငန်း။
အဆိုပါ EDCF ကို Global Update ကို session တစ်ခု, တစ်ဦးကိုနှစ်စဉ် IBC ဖြစ်ရပ်၏ထူးဆန်းသောအုပ်စုတစ်စုပါဝငျမညျ SMPTE အသင်းဝင်များ။ 15 ဘို့စီစဉ်ထား: တနင်္ဂနွေ 45 စက်တင်ဘာ 13 ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည် SMPTE သူချင်း Siegfried Foessel, Fraunhofer Institute ကမှာရုပ်ရှင်ရုံနည်းပညာများ၏ဦးခေါင်း, SMPTE ခငျြးကိုယောဟနျသ Hurst, Cinecert မှာစီအီးအို; ဂျူလီယန် Pinn, ဂျူလီယန် Pinn, Ltd မှာဒါရိုက်တာ .; နဲ့ Richard ဝလေ, SMPTE EMEA နှင့် Sundog မီဒီယာ Toolkit ကိုမှာဗဟိုနှင့်တောင်အမေရိကတိုင်းဒေသကြီးနှင့် CEO ဖြစ်သူများအတွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး။ ဤရွေ့ကားဟောပြောကမ္ဘာတဝှမ်းရုပ်ရှင်ရုံတစ်ခုနောက်ဆုံးပေါ်စီးပွားရေးခြုံငုံသုံးသပ်ချက်, နည်းပညာ, နှင့်အရည်အသွေးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုပူဇော်ပါလိမ့်မယ်။ ရန်အချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသောနှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာဆွေးနွေးငြင်းခုံအကူးအပြောင်း SMPTE DCPs ယခုတစ်လည်ပတ်အဖြစ်မှန်ဖြစ်လာနေသည်နှင့်ဤအပြောင်းအရွေ့များနှင့်မည်သို့ဥရောပ၌စီမံခန့်ခွဲနေပါသည်၏အရေးပါမှုကိုရှင်းပြခဲ့လိမ့်မည်။ တစ်ဦးအပြန်အလှန်မေးခွန်းအဖြေကို session ကိုအဲဒီ session ကောက်ချက်ချပါလိမ့်မယ်။
တနင်္လာနေ့, စက်တင်ဘာ2အပေါ် 14 pm မှာ, "immersive ရုပ်ရှင်ရုံ: အသံ" ကိုလည်းနီးပါးလုံးဝဖွင့်ထား panel ကိုမည်ဖြစ်သည် SMPTE အသင်းဝင်များ။ အဲဒီ session အဲဒီ session ထုတ်လုပ်သူသူသည် Pinn, feature တော်မူမည် ဒင်းနွားထီးတကောင်, Dolby မှာနည်းပညာမဟာဗျူဟာ, ရုပ်ရှင်ရုံ, ဒါရိုက်တာ, ဘရိုင်ယန် Claypool, Barco မှာမဟာဗျူဟာမြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အကြီးတန်းညွှန်ကြားရေးမှူး; တစ်တန် Kalker, DTS မှာထွန်းသစ်စနည်းပညာများ၏ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ; နှင့်က Denis Tremblay မှာအသံနည်းပညာ၏လျှပ်စစ်နှင့်အသံအင်ဂျင်နီယာမန်နေဂျာ IMAX။ တက်ရောက်လာသည့်စံချိန်စံညွှန်းများ၏ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ရှင်းပြချက်အရမြျှောလငျ့နိုငျယခုရုပ်ရှင်ရုံအသံအဖြစ်ရုပ်ရှင်ရုံများအတွက်စွဲငြိဖွယ်ရာအသံအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်တိုးတက်လာတခုတခုအပေါ်မှာကျွမ်းကျင်သူရှုထောင့်မှလေးစားမှုနှင့်အတူဆောင်ရွက်လျက်ရှိအလုပ်လုပ်။ အဆိုပါ IBC Big Screen ကိုအတွေ့အကြုံအတွက် featured အဖြစ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့အဲဒီ session စွဲငြိဖွယ်ရာအသံဥပမာများကိုပါလိမ့်မယ်။
တစ်ဦး IBC-မိတ်ဖက်သကဲ့သို့, IBC ညီလာခံအတွင်းအစည်းအဝေးများထုတ်လုပ်အပြင်, SMPTE တစ်ဖန်နုပျိုပညာရှင်များအတွက်အရေးပါဆုံးအကြောင်းအရာများကိုင်တွယ်ရန်ဒီဇိုင်းရှင်းလင်းပွဲအစည်းအဝေးများကမ်းလှမ်းထားတဲ့မြင့်တက် Stars အစီအစဉ်ကိုကူညီပေးနေသည်။ အလားအလာကနေမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေနှင့်တည်ဆဲ SMPTE အသက်အရွယ်နှင့်အတွေ့အကြုံ, ထိုလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဝန်ထမ်းများနှင့်စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဝင်များအပေါ်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည် SMPTE လက်ရှိခေတ်ရေစီးကြောင်းဆွေးနွေးရန်ရပ်များနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများဖြေဆို SMPTE လှုပ်ရှားမှုများ, အရင်းအမြစ်များနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်အပါအဝင်စာပမြေား "SMPTE စံချိန်စံညွှန်းများလပတ်အစီရင်ခံစာ "ဟုအဆိုပါ၏ဇူလိုင်လအစည်းအဝေး၏ထားတဲ့အလိုတော်အသေးစိတ်ရလဒ် SMPTE စံချိန်စံညွှန်းများကော်မတီ, နှင့်ဒဖြန့်ချိ SMPTE ယင်းကို IEEE Xplore platform ပေါ်တွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်စာကြည့်တိုက်။
SMPTE ဝန်ထမ်းများနှင့်ခေါင်းဆောင်မှုအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အကျိုးကျေးဇူးများကိုနှင့်နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အအပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါအတွက်လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အခန်းကဏ္ဍဆွေးနွေးရန် (မိတ်ဖက်ကျေးရွာ 2015.F8f) ရပ်ဟာ IBC51 မှာမရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ကိုလည်းအပေါ်အပြည့်အဝအသေးစိတျကိုပေးနိုင်ပါလိမ့်မည် SMPTE 2015 နှစ်ပတ်လည်နည်းပညာဆိုင်ရာညီလာခံ & ပြပွဲ (SMPTE အတွက်အောက်တိုဘာ 2015-26 ရာအရပ်ကိုကြာမြင့်မည်ဖြစ်သော 29), ဟောလိဝုဒ်ကယ်လီဖိုးနီးယား။ အဲဒီမှာဒိုင်ယာလော့ခ်များကတိုးပွားလာကြ SMPTE အဆိုပါ IBC2015 ရှိုးမှာအဖွဲ့ဝင်များသည်ဧကန်အမှန်အရွေ့လျားမှုပုံရိပ်၏အနုပညာနှင့်သိပ္ပံများတွင်နောက်ထပ်တိုးတက်မှုများကိုလှုံ့ဆော်, ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ IBC2015 isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော SMPTE UHD တိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ ဗီဒီယို ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2015-08-31
ယခင်: linear Acoustic IBC 2015 မှာ AERO.soft ™ပြ
နောက်တစ်ခု: Austin, TX အတွက်2နေ့ရက်များများအတွက် audio အင်ဂျင်နီယာချုပ်